Ayyaanaa Irreechaa, 2015
Dilbata Ayyaana Gubaatti aanee dhufu irratti, waggaa waggaatti kan ayyaaneffamu – ayyaanni Irreechaa, baranas – yeron isaa ga’ee Dilbata dhufu kana, Bishooftuu Hara_Har-sadiitti ayyaaneffamuuf jira. Ayyaana kanaaf qophiin godhamaa jira. Paartiin mormituu – Koongiresiin Federaalawa Oromoo garuu, deemsa qophii kanaatti akka hin gammadiin beeksisuun ibsa baasee jira. Ayyaanni Irreechaa, ayyaana Oromoon aadaa fi amantii isaa ittiin ibsatu – kan jedhu, ibsi Koongiresa Federaalawa Oromoo, “ garuu, haala deemsi ayyaanichaa gaafatuu alatti sochiin godhamaa jira” jedha.
“Fiigichoo Irreechaa guddicha – maqaa jedhuun qophiin jiraachuu fi erbee akkanaa qabadhaa malee, mallattoolee akkanaa hin qabatiinaa” jechuun kanneen wata-watan jiraachuu dubbatee, “fedha dhuunfaa fi fedha siyaasaa isaanii uummata irratti fe’uuf carraaqaa jiru” jechuudhaan, paartii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo sanaa balaaleffatee jira. Ayyaanni Irreechaa, guyyaa ayyaaneffanaa aadaa fi galataa ta’ee otuu jiruu, haala ayyaneffannaan sun gaafatuu alatti --- karaa malkaa bu’anii ayyaaneffatan irratti Baandii Muuziqaa sirbsiisuu fi haasawa aangawoota polotikaa dhiheessuun, kanneen ibsi paartichaa akka fakkeenyaatti fudhachuun morme.
Sochiilee mormii geggeeffaman hordofee – naannoolee Oromiyaa, Amaaraa fi Kibbaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaawaman ajjeesamuu ka dubbatan – Miseensi koree hoji-raaw’achiistuu Koongiresa Federaalawa Oromoo – Obbo Xiruneh Gamtaa, ayyaaneffannaan Irreechaas kan kana ilaalcha keessa galche ta’uu qaba – jedhu.
Kana ilaalchisee, dubbi-himaan Mootummaa naannoo Oromiyaa – Obbo Fiqaaduu Tesemmaa, deebii gama mootummaa kennuuf waadaa seenanii jiran – jedha – gabaasaan keenya Eskindir Firew. Akkuma gargannetti dhiheessina.
Gabaasaa aguutuu kana cuqaasaa dhaggeeffadhaa